टिभी हेर्ने क्रममा करेन्ट लागेर ७ वर्षीया बालिकाको निधन – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ०५, २०७८ समय: ११:४१:३५
( प्रतीकात्मक तस्बिर )लमजुङ । टिभी हेर्ने क्रममा विजुलीको करेन्ट लागेर ७ वर्षीया बालिकाको निधन भएको छ । राइनास नगरपालिका– ७ सालफेदी गाउँमा बस्ने राकेश पाण्डेकी ७ वर्षीया छोरी सृष्टि पाण्डेको करेन्ट लागेर निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनी घरमा खेल्दै गरेको अवस्थामा टि.भि. हेर्न गएको र सोही क्रममा टीभीको विद्युतीय तार सर्ट (विद्युत चुहावट) भई हातमा करेन्ट लागि घाइते भई बेहोश भएकी थिइन् । छोरीलाई बेहोस अवस्थामा देखेपछि आमाले स्थानीयलाई खवर गरी उपचारको लागि सोही वडा स्थित सहोदर अस्पतालमा लगिएको थियो । उपचारको क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
ओलीले किन गरे भिम रावलको प्रशंसा ?
साउन ५, २०७८ – by Samaj Patra
एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र देउवा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने दलहरूप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
देउवा सरकारले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।
ओलीले रावललाई आग्रह गर्दै भने, ‘हतारिएर किन राजीनामा दिएको ? सल्लाह गर्नुपर्ने ? अझै पनि सकिन्छ भने राजीनामा फिर्ता लिनू ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
Last Updated on: July 20th, 2021 at 11:41 am